"Triampur" Tablets kukhona iqembu pharmacotherapeutic of isisu. ezisebenzayo: hydrochlorothiazide futhi triamterene.
Umuthi 'Triampur "yokusetshenziswa Kunconywa nomfutho wegazi ophezulu. I nomuthi iqondiswa ukuqeda edema elihlobene ne kwezinso of izinso, inhliziyo, isibindi, ikakhulukazi ezimweni lapho kudingeka ukuvimbela ukulahleka umzimba potassium. Lihambisana glycosides inhliziyo imithi "Triampur" ukufundiswa ukusetshenziswa Kunconywa ukuhluleka inhliziyo uma kudingeka ngaphezu kwalokho ukuhoxisa liquid noma potassium isivuno engezansi.
Umuthi is contraindicated ku ukungasebenzi ezinzima kwezinso, uropoiesis elinganiselwe (anuria eqinile), ukuvuvukala okukhulu izinso (glomerulonephritis acute). I nomuthi "Triampur" umyalelo ku isicelo ayivumeli eya endaweni e hypersensitivity kuya sulfonamides noma izingxenye ejenti. Hhayi imithi Kunconywa dysfunctions ezinzima isibindi (hepatic ikhoma futhi precoma), iziyaluyalu electrolyte ibhalansi, hypovolemia.
Umuthi 'Triampur "is contraindicated ekukhulelweni. Nokho, ezimweni ezingajwayelekile kakhulu, udokotela wakho angase akukhuthaze imithi, ekuhloleni ebungozini-fetus kanye kungenzeka inzuzo unina. Uma kudingeka, thatha imithi ngesikhathi lactation yokudla imisiwe.
Isikali "Triampur" imfundo manual incoma ukuthi ufake ngamunye.
Ezigulini kabani isisindo amakhilogremu ezingaphezu kwamashumi amahlanu, ezithile Isikali letiphakanyisiwe lwemithi yokulungiselela.
Ukuqeda edema ezinqunyiwe kabili ngosuku izibhebhe ezimbili. Kungcono ukuthatha imithi ekuseni ntambama amahora. Isondlo Isikali - ithebhulethi ngelanga ekuseni izibhebhe ezimbili zonke izinsuku ezimbili. Uma kudingeka, lokhu umthamo (kuseluleko kadokotela) zingandiswa amaphilisi amane.
Nge nomfutho wegazi ophezulu Kunconywa amaphilisi amane ngosuku (ekuseni emini). reception Ngaphezu kwalokho ezinye antihypertensives noma ngesikhatsi ukwelashwa isikhathi eside lwanele izibhebhe ezimbili ngosuku.
Njengoba izidakamizwa yokwelapha concomitant ukhombe ezimbili, esiphezulu amaphilisi amane ngosuku. Ngezinye enciphile umsebenzi kwezinso, umthamo Kunconywa - alikho iphilisi ezingaphezu kwesisodwa ngosuku.
Imithi kungabangela imiphumela engathandeki. Lapho ebonisa indlela lo izidakamizwa "Triampur" kwezinye izimo, zikhona nomlomo owomile, ukozela, ataxia, uvalo ubuhlungu bekhanda, ukukhathala. I nomuthi kungehlisa izinga lachrymal uketshezi ukuwohloka myopia etholakalayo, angaboni kahle (omnene). Ngezikhathi ezithile kungase kube ukushaya kwenhliziyo, izinguquko ECG, hypotension orthostatic, uhudo, ukungakhululeki epigastric, oluhambisana pancreatitis, jaundice, ngokwengxenye isimiso emathunjini. Against isizinda cholelithiasis ekhona lapho ukuthatha imithi "Triampur" angagcina ukuvuvukala kule gallbladder.
Ngu amathuba imiphumela emibi ibandakanya yokuphazamiseka kwamanzi exchange futhi electrolyte ibhalansi, enanini glucose, triglyceride, cholesterol, uric acid kanye astsidoz umzimba, hypovolemia, amanzi emzimbeni.
Kwezinye izimo, kwazeke isimo esishubile imisipha, lwamathambo imisipha flaccidity, amajaqamba imisipha ithole. Akuvamile ukuzwa ukusabela komzimba ngendlela imfiva, isifuba amawala, ukulunywa futhi erythematosis ububomvu.
Kuyo yonke ukwelashwa kuyadingeka ukwandisa inani loketshezi kudliwe nsuku zonke.
Phakathi ukwelashwa, ochwepheshe batusa ukuba ayeke ukuthatha leso utshwala.
Ngaphambi kokusebenzisa izidakamizwa "Triampur" kufanele kudokotela.
Kumzhenskaya Grove (Rostov-on-Don): incazelo, izithombe. Memorial Grove Kumzhenskoy